Dhageyso: Malaaq Shiino Oo Jawaab Kulul Siiyay Mooryaan Axmed Diiriye & Beeshiisa | cowslafil news network
Dhageyso: Malaaq Shiino Oo Jawaab Kulul Siiyay Mooryaan Axmed Diiriye & Beeshiisa
Posted by cowslafil On July 21, 2014 1 Comment
Kulankan oo ahaa mid looga soo horjeeday, kulan dhawaan ka dhacay hotelka City Plaza ee magaaladda Muqdisho, ayaa waxaa kasoo qeyb galay qaar kamida Odoyaasha iyo Cuqaasha beelaha kasoo jeeda Koonfurta dalka, gaar ahaan Waxgaradka Beelaha Digil/Mirifle iyo Biimaal.
Odayaasha ayaa gashaanka u daruuray kulankii beesha hawiye ay Muqdisho ku yeelatay, kuna sheegeen in ay kasoo horjeedaan aqoonsiga dowladda, ay aqoonsatay maamulka Seddexda gobol ee Koonfur Galbeed.
Malaaq Shiine oo ka mid ahaa Cuqaashi kulanka maanta ka hadlay, ayaa sheegay in ay u arkaan wax laga xumaado, dad aan asal ahaan kasoo jeedin goboladda Koonfureed , in ay ka shiraan masiirka gobolka Sh/hoose kuna doodaan inay iyagu leeyihiin.
Malaaqa, ayaa sidoo kale eedeyn dusha uga tuuray Dowlada Federaalka oo uu sheegay in Saaraakiisha Biimaal iyo kuwa Digil /Mirifle ay darbiyada fadhiyaan oo aan laga shaqaaleysiinin deegaankooda, balse dowlada ay wakiilatay Mooryaan dhiigyo cab ah.
Si kastaba lama oga, hadalkaan kasoo yeeray Waxgaradka Koonfur Galbeed, waxey ka bedeli karto xiisadda dagaal ee weli ka taagan gobolka Sh/hoose.
Previous:Xildhibaanad Caasha Cabdalla:Qaraxyada Muqdisho waxaa ka dambeeya Xasan Sheekh
Next: Wafdigii dawlada ay u dirtay hiiraan oo maanta la kulmay waxgaradka dhinac kamid ah dhinacyada Dagaalamay
12:49 am July 27, 2014